जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ ? यहाँ छ कर्मचारी माग | Ratopati
जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ ? यहाँ छ कर्मचारी माग
काठमाडौँ । के तपाईँ रोजगारीको खोजीमा हुनुहुन्छ ? काम गर्ने चाहना हुँदा हुँदै पनि जागिर नपाएर हैरान हुनुहुन्छ ? आजको कान्तिपुरमा कर्मचारीको माग सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको छ । जन तपाईँको योग्यता, क्षमता र चाहना अनुरुपको पनि हुनसक्छ ।